Shirri Yuunivarsiitii Rifti Vaalii irratti hojjetamu ,shira Habashoonni – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsShirri Yuunivarsiitii Rifti Vaalii irratti hojjetamu ,shira Habashoonni
Shirri Yuunivarsiitii Rifti Vaalii irratti hojjetamu ,shira Habashoonni
Shirri #Yuunivarsiitii_Rifti_Vaalii irratti hojjetamu ,shira Habashoonni Dhaabbilee Oromoorratti hojjetaniin hidhata qaba.
Yuunivarsiitiin Riift Vaalii hojii baruu fi barsiisuun alatti guddina biyyaa keessattis ta’ee rakkoowwan ariifachisaa biyyatti muudachaa ture keessatti gahee inni bahaa turee fi jiru kan dagatamuu miti. Keessumattuu ijoollee harka qalleeyyii ta’an bilisa barsiisurraa jalqabee hanga rakkoowwan hawwaasummaan walqabatan kan akka hiyyeessa gargaaruu fi dhukkubsataa tola yaalchisuutti qoodni inni bahaa jiru hin dagatamu. Kanumaaf maqaan jaalalaa “Abbaa Hiyyeessaa” jedhu ummatarraa kennameef .
Milkaa’inni RVUn gama barnootaa fi jaalalli inni ummata biratti argachaa jiru kan isaan hin gammachiifne Dhaabbileen barnoota dhuunfa Habashootaa fi namoonni dhuunfa HERQA Keessa jiran tokko tokko harka lafa jalaan duula maqaa xureessuu gaggeessa jiru.
Duulli maqaa xureessuu kunis dhaabbileen dhuunfaa qabeenyummaan isaanii oromoo ta’an maqaa balleessun dorgommii dinagdee keessa baasudha.Kunimmoo kaayyoon isaa oromoon dinagdeen kufee isaan jalatti akka bulu barbaadu.
Sababni ani kana kaasef gaafa guyyaa 17-08-2011tti liistii HERQAn dhaabbilee barnootaa ulaagalee barbaachisu hin guunne jedhee baase keessatti Rift Valley University lakk.10ffaa irratti kaa’era.Ulaagaleen hin guutamin jedhamus waraqaa heeyyama daldalaa hin qabdan kan jedhu ture.
Dhugaan jirtu garuu kanaa miti.Rift valley university waraqaa heeyyamaa kan daldalaas ta’ee nagaheewwan Gibira ittiin kanfalaa ture maxxansa kanaa gadiirraa ilaalun ni danda’ama.
Dhumarratti Odeeffannoo ragaa qabatamaa hin qabneen maqaa dhaabbaticha ta’e jedhanii akka inni ummata keessatti fudhatamummaansaa hir’atu gochuuf miidiyaa hawaasummaarratti baasuu keessaniif dhaabbatichi seera yakkaa maqaa balleessutiin akka isin himachuuf jiru ibsuu barbaanna.
Mootii O Alemu
Sabboonummana Oromoo taankii fi xiyyaara waraana Oromoo ti!
Hin irranfatamtuu yoguu Hara’a Jiruun jollumma gandaa badiyya